Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Uruguayan Diego Godin Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha "Capitan“. Diegomụaka Diego Godin anyị na-akọ akụkọ akụkọ na-enweghị isi akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Ee, onye ọ bụla maara nke ọma iji chebe onwe ya mana ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Diego Godin's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Diego Godin Childhood Story - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Diego Roberto Godin Leal mụrụ na 16th nke February, 1986 na Rosario, Uruguay. Ọ mụrụ nne ya, Iris Lial na nna ya bụ Julio Godin.
O toro na Rosario na Hungary, Godin na-eto eto, mgbe ọ dị afọ anọ merụrụ ọnwụ mgbe ọ dabara na iyi. Ihe merenụ nke gosipụtara otu n'ime ọtụtụ agha Godin maka ịlanarị mere mgbe ezinụlọ ya gara ịchụ nta n'ọhịa nke Rosario.
Arda Turan Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
Ka ezinụlọ ahụ kwadebere ịsacha nnụnụ ndị ha chụrụ, Godin na nwanne ya nwanyị, Lucia gara mkpagharị ma na usoro ahụ wee rute iyi (n'akụkụ ugwu) nke nwere azụ na-egwu mmiri n'elu ala.
Ebumnuche nke nwatakịrị nwoke ahụ malitere ịchụ nta ka ọ na-atụ egwu na nkume iji jide otu azụ. N'ime sekọnd ole na ole, ọ hụrụ na ọ dị n'olu na iyi ahụ, ike dị egwu na-ebugharị ya. Lucia gbara ọsọ iji gwa ndị mụrụ ha bụ ndị na-agbasaghị iyi ahụ n'egbughị oge iji hụ Godin ka ọ na-ewere ụkwụ ikpeazụ nke igwu mmiri n'ụzọ ọrụ ebube na nchekwa.
Ichetara ihe merenụ afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, Chineke gosipụtara na;
“Ọ bụ ọrụ ebube, enweghị m ahụmahụ igwu mmiri mgbe m dị afọ anọ yana eziokwu na m na-eyi buutu na akwa oyi. Otú ọ dị, ịkụ aka m n'ụzọ m na-echetaghị chebere ndụ m ”
Diego Godin Childhood Story - Buildup :lọ Ọrụ:
Ọnwụ ahụ na-eru nso na-emecha bụrụ otu n’ime oge ole na ole Godin nupụrụ isi megide ọnọdụ ndị chọrọ ịkwatu ya. Mgbe ihe ahụ mechara, ọ malitere itinye aka n'egwuregwu gụnyere basketball basketball na otu igwu mmiri na-eyi egwu.
N'oge na-adịghị anya, Godin kpebiri ịmalite ịgba bọl, mkpebi o mere mgbe ọ dị afọ 15 na ndụ ebighi ebi iji nwee mmasị n'ịzọ ụzọ ahụ n'ụzọ gafere atụmanya;
"Ọ bụ ezie na o siri ike ịhọrọ egwuregwu m ga-etinye na ya, agara m ahịhịa ma nweezi ihe niile ga - eme m obi ekele maka ịme nhọrọ a"
N'adịghị ka ụmụ nwoke Genius bụ ndị na-agba ọsọ bụ ndị na-edebanye aha na klas ndị na-eto eto tupu oge 10, nwata Godin, mgbe ọ dị afọ 15 malitere ọchịchọ ya maka ọkachamara na Defensor Sporting, ụlọ nke mere ka ọ kwụsị ọrụ ya na ihe kpatara na ọ dịghị mma .
Mmepe ahụ hapụrụ Chineke, ma mee ka ọ chee echiche ịkwụsị ọchịchọ ya nke ịgba bọl ọkachamara n'ihi na ọ chụọla ọtụtụ àjà gụnyere ụfọdụ ịhapụ obodo ya bụ Rosario na isi obodo Uruguayan nke Montevideo na ịhapụ egwuregwu ndị ọzọ iji kpọọ maka Defensor Sporting.
Onye agha a na-anwụ anwụ abụghị otu ịhapụ ịda mbà, mgbe ọ gbusịrị obere oge, ọ gbapụrụ bọmbụ ọzọ site n'ịchọ idebanye aha na Club Atletico Cerro nke nyere ya ohere ikpe. Chineke gosipụtara ihe kachasị mma mgbe ọ na-arụ ọrụ ego ahụ ma jide onye nlekọta ntorobịa, William Lemus, onye nyere Chineke nkwekọrịta mbụ ya.
Diego Godin Biography - Bilie Iji Maara Aha:
Diego Godin malitere dị ka ịga n'ihu na Atletico Cerro. Ọ na-enwe obi ụtọ igwu egwu n'ọkwá ahụ tupu e mee ya ka ọ rụọ ọrụ dị ka midfielder na n'ikpeazụ dị ka onye na-agbachitere ya. Ọ bụ ezie na Godin enweghị mmasị na ọrụ ọhụrụ ahụ, ọ gbanwere ya ma mee onwe ya ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na-agbachitere kachasị mma nke ọgbakọ tupu ya agafee na Club Nacional de Football.
Nnukwu ezumike Chineke bịara na 2007 mgbe o jidere mmasị nke ọgbakọ Spanish, Villarreal, mgbe ọ nọrọ otu oge na Club Nacional. Ọ bụ na Villarreal na Godin meere onwe ya aha site na iji nnukwu nkume na-agbachitere ya Gonzalo Rodriguez na obi nke Villarreal agbachitere.
Topdị elu ya mere ka ọ gaa Atletico Madrid ebe ọ malitere egwuregwu mbụ na UEFA Super Cup megide Inter Milan wee ghọọ otu n'ime ndị ọkpụkpọ kacha elu nke Club. Ọnụnọ ya na Atletico Madrid hụrụ ka otu ahụ merie Europa League Trophies abụọ, otu iko La Liga na Njikọ Njikọ Abụọ nke abụọ ebe ha tufuru Real Madrid. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Mmekọrịta mmekọrịta nke Diego Godin:
N'azụ ndị ọkpụkpụ ọ bụla nwere ihe ịga nke ọma, e nwere n'ezie ọmarịcha egwu. Diego Godin nọ na enyi ya nwanyị, Sofia Herrera maka ihe dị ka afọ anọ kemgbe oge ederede.
Oge duo zutere n'oge egwuregwu football n'etiti Barcelona na Atletico Madrid mgbe Sofia nọ na-agbalị inweta tiketi maka egwuregwu ahụ, mmekọrịta ha na-agbakwa kemgbe ahụ.
Sofia Herrera bụ onye gụsịrị akwụkwọ na Scuola Italiana di Montevideo. Ọ bụkwa ada nwa ada bọọlụ mbụ Jose Herrera, onye gbaara Penarol na Uruguay bọọlụ. Di na nwunye ahụ kwere onwe ha nkwa n'oge na-adịbeghị anya na ndị fans agaghị eche ịnụ mgbịrịgba agbamakwụkwọ maka ụda duo.
Diego Godin Personal Eziokwu:
Diego Godin toro na-ewuli ụdị onye agha na onye na-anwụ anwụ. N'ịmara ụwa dị ka ebe siri ike, o mepụtara nkà mmụta ndụ ya na ụkpụrụ nke izi ezi na mgbe ọ na-eguzo onwe ya. A àgwà nke mere ya dị anya na ọrụ ya.
Godin dị umeala n'obi, mana ihe kachasị mkpa, ọ bụ onye egwuregwu. Otu ihe dị mkpa nke a na-ekwesịghị ileghara banyere Diego Godin bụ na ọ bụ nna nna, ma mgbe anyị na-ekwu nna nna, anyị na-eche na ọ bụ nna nna na Antoine Griezmann si nwa, Mia. (ya na nna ya). Ka a sịkwa ihe mere onye agbachitere ahụ ji kwuo ozugbo;
“Ana m agbalị mgbe niile ịbụ ezi ihe nlereanya nye ụmụaka ndị na-eso m”.
Diego Godin Biography Eziokwu - Ọnwụ nke Ọtụtụ Ezé:
Ihe omume ọzọ nke na - eyi egwu na ndụ mana hapụrụ Diego Godin na ọnya maka ndụ bụ ọnwụ nke ọtụtụ ezé n'oge ọgba aghara nke Athletico Madrid na Valencia na February 2018. Ihe ahụ merenụ mere mgbe Godin nọ na ihe ịma aka ikuku na obi ọjọọ na onye na-eche nche, Neto.
Mgbe ihe merenụ gasịrị, a gbanwere Godin mgbe ụlọ ọrụ ya wepụtara nkwupụta oge mgbe e mesịrị na-achọpụta na onye ahụ ga-agbachitere ga-arụghachi usoro ịwa ahụ ọzọ. Nkwupụta ahụ gụrụ;
“Diego Godin merụrụ ahụ n’ihu ya n’oge asọmpi ahụ megide Valencia. Onye na-agbachitere anyị nwere mgbaji ọkpụkpụ dentoalveolar na atọ nke maxilla ya [nke dị na elu elu]. Ọ ga-awa ahụ maxillofacial na ụbọchị ndị na-abịanụ. ”
Diego Godin Biography Eziokwu - Captain Godin:
Ọ bụrụ na ịnya isi bụ ihe ọ bụla ga-abịa site na Chineke, ọ ga-eme ka ọ dị mkpa n'eziokwu ahụ bụ na ọ nọ na-ahụ
'onye isi' n'oge nke atọ ya na Atletico Cerro nke Uruguayan mgbe ọ dị afọ 19.
N'ikpeazụ, e zigara Diego Godin na Primera Division Powerhouse Club Nacional de Football ebe e mere ya onyeisi ndị otu mgbe ọ bịarutere n'afọ 2006. Na mgbakwunye, o meela ọtụtụ ngosi maka Athletico Madrid na-eyiri otu onye isi ndị isi .
Ọchịchị ya karịrị ọrụ ịgba egwu dị ka onye bụbu onye isi nke Uruguayan National team Diego Lugano, mgbe ọ lara ezumike nká na mba ụwa nyefere onye isi ndị agha ya Diego Godin ka ọ duru ndị otu na-agbachitere Copa America Title.
Eziokwu nke Diego Godin - Mma:
Diego Godin bụ onye kwesịrị ekwesị. Ọ bụ ezie na ọ bụghị onye nwere nkwarụ dị elu na Macho, Chinekein na-agbasi mbọ ike ka ọ dịrị ndụ dị mfe. Ihe omumu ya na-eme ka ọ ghara ịdị elu ma na-agụnye mmemme mkpiri obi dị ka sprinting.
Diego Godin na-etinyekwa nkuzi dunes ọzụzụ na ntachi obi na-ejikọta akụkọ banyere ume ya na mpaghara egwu.
Diego Godin Biography Eziokwu - Onye Nkwalite:
Ihe ndị Diego Godin rụzuru dị ọtụtụ na pitch. Otú ọ dị, o nwere ụfọdụ ndị a ma ama na pitch. N'ịbụ onye na-agbachitere amamihe, a na-atụ anya na ọ ga-abụ nnukwu egwuregwu maka ịkwalite ụdị na ụlọ ọrụ. Ihe nkwado abuo abuo nke Diego Godin choputara bu ndi kwesiri ekwuputa bu ndi nwere Tech-brand, Apple na ndi na-eme egwuregwu, Puma.
Edekọtara ego niile ọ na-enweta site na klọb ya ka ọ bụrụ nde dollar 14.543 Ọnụahịa ahịa ọ na-adịbeghị anya bụ 22.8 nde dollar. N'ihi ya, ụgbụ ya bara uru. Ọ na-akwụ ụgwọ ụgwọ kwa afọ nke nde $ 4.576 ma nwee atụmatụ ruru nde dollar 4.5 dịka nke 2017.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Diego Godin Childhood akụkọ tinyere akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.